Miss ထားထက်ထက် ဟာဆိုရင် miss grand international ပြိုင်ပွဲမှာသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးပါ။ Miss တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရဟိတများစွာကို လည်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက အားကစားဝါသနာပါသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်မှ နည်းပြတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ထားတက်ထက်က မြန်မာ့ကျွမ်းဘား အားကစားရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတထံ တိုင်ကြားစာ တစ်စောင်ကို သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အားကစားလောကမှ တာဝန်ရှိ လူကြီးများနှင့် အားကစားလောကကို တကယ် တိုးတက်စေလိုသော လူကြီးမင်းများ သိရှိ အရေးယူနိုင်ပါစေရန်…….ထားထက်ထက် အနေဖြင့် ကျွမ်းဘားအားကစားကို အသက် ၅ နှစ်မှ စတင် ကစားခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်တိုင်တိုင် နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင်အဖြစ် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲတွေအထိယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ နည်းပြအဖြစ် ကျွမ်းဘားအားကစားရုံ (ကျိုက္ကဆံကွင်း) တွင် ရန်ပုံငွေ လစဉ်ပေးသွင်း၍ သင်ကြားခဲ့ရာ ၅ နှစ်နီးပါး သင်ကြားခဲ့ရာ၌ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် မိမိအပါအဝင် အခြားနည်းပြများ ၊ ကလေးမိဘများအတွက် များစွာ အခက်အခဲ ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာများကို တင်ပြလိုပါသည်။
Accident တခုကြောင့် ကိုယ်တိုင်မကစားနိုင်တော့တဲ့အချိန် ၂၀၁၅ ကစပြီး ကိုယ်သင်ထားတဲ့ ပညာတွေ အလကားမဖြစ်စေချင်တာ တစ်ကြောင်း ၊ ကလေးငယ်တွေကို ကျွမ်းဘားသင်ပေးချင်တာ တစ်ကြောင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်မှာ Weekend တွေဘယ်သူမှမရှိတဲ့ အချိန်ကို အချိန်ပိုင်းအဖြစ် ငှားရမ်းသင်ကြားခွင့်ပေးဖို့ စာတင်ခဲ့ပြီး ဥက္ကဌရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကလေး တစ်ယောက်နဲ့ စတင်သင်ကြားခဲ့တယ်။ ကျွမ်းဘားအားကစားရဲ့ သံတမန်အဖြစ်လဲ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတယ်။သင်လာရင်းနဲ့အတန်းထဲမှာ ကလေးတွေ တဖြည်းဖြည်း တော်တော်များလာခဲ့တယ်။ကလေးတွေ များလာတော့ လူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း မနာလိုတွေဖြစ် သူတို့ပဲ လိုချင်၊ လုပ်ချင်လာတယ်….ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၈ အစကတည်းက ယာယီအတွင်းရေးမှူးမှ စတင် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး အကျင့်ယုတ်ပါတော့တယ်…”
“၁။ ပထမဆုံး ကစားရုံ အသစ်နဲ့အဟောင်း ၂ ခုရှိတာကို ထားထက် ကလေးတွေ အသစ်မှာကစားလို့မရဘူး၊အဟောင်းမှာပဲ ကစားရမယ်ဆိုပြီး ကလေးချင်းခွဲခြား၊ ဆရာချင်းခွဲခြားနဲ့ ဒါစည်းကမ်းပါ ဆိုပြီး စတယ်……
၅။ အားကစားရုံ သော့ကိုင်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် ကျန်ခဲ့ပေမယ့် နေပြည်တော်သွားရမှာမို့ဆိုကာ ကြိုတင်မပြောပဲ ကစားရုံကို သော့ပိတ်တယ်။ ကျောင်းအုပ်ကိုလှမ်းပြောတော့မှ မတတ်သာလို့ တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်…..”
“၆။ ကိုယ်သင်နေတဲ့အချိန်မှာ နေ့လည်ပိုင်း အချိန်ငှားထားတဲ့ သူတို့နှင့် ရင်းနှီးသောဆရာကို မနက်ပိုင်းကိုယ့်အချိန်မှာ သက်သက် လူရှုပ်အောင် လာသင်ခိုင်းတယ်။ ရှိနေတဲ့ တခြမ်းကို နေရာမပေးပဲ လုပြီး သင်ပြတယ်….
၁၀။ ၂၀၁၉ January မှာ နင်တို့သင်တဲ့အဖွဲ့ February တလလုံးဖွင့်လို့မရဘူး။ ပိတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တွေလိုပဲ သင်နေတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဆိုသူက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ဘာလို့လဲမေးတော့ ဆရာမက ကျောင်းသားတွေကို တလလုံးသင်ရမှာမို့တဲ့၊ နင်သင်တဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိပဲမို့ ၊ ငါလဲသင်လို့မရဘူး ပိတ်ပေးရမှာဆိုပြီးပြောတော့ ဒါဆိုရင်စာထုတ်ပေးပါ ပိတ်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့လက်မှတ်နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကစာထုတ်ပေးပါပြောတော့ လုပ်ကြံပြောနေကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာမထုတ်ပေးနိုင်ကြဘူး။ ဒီတော့မှ ဝိနည်းလွတ်အောင် ဒါဆိုလွတ်တဲ့နေရာ အခြားတဖက်မှာ ကစားပါဆိုပြီး အတွင်းရေးမှူး လုပ်သူက လှည့်ပတ်ပြောပြန်တယ်။ တကယ်တန်း ကျောင်းသားတွေကို သင်တာ တလလုံးမှာမှ ၃ ရက်ထဲ တရက်ကို ၁ နာရီပဲ သင်ခဲ့ကြတာ….. သတ်သတ် ဉာဏ်ဆင် ကလိန်ကကျစ် ကြခဲ့တာ။”
၁၃။ ငှားခ ပိုက်ဆံသွင်းနေရာကနေ မယူတော့ဘူး အတင်းစလုပ်ကတည်းက အကွက်တွေရွှေ့နေပြီဆိုတာ သိနေလို့ ငှားခပေးပါမယ် ဆိုတာ လက်မခံခဲ့ဘူး၊ အဖွဲ့ချုပ် အသစ်ဖွဲ့တော့လည်း အချင်းချင်း လက်သိပ်ထိုး ရာထူးယူကြ အမျိုးမျိုး ညစ်ပြပြီး နည်းပြ အဖွဲ့တွေ အကုန် ကန်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကိုကစားခွင့်မပေးတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြေလည်အောင် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုပြီး ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာတောင် လုပ်ပေးလို့ရရက်နဲ့ မလုပ်ပေးပဲ နည်းလမ်းမကျတဲ့စကားတွေသာပြောခဲ့ပါတယ်။ယခုကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ် အသစ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခင်ကျွမ်းဘား အဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု၊ အကျင့်ပျက် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုအပါအဝင် ပြစ်ချက်ပေါင်း (၁၄) ချက်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ ဒု-ဥက္ကဌ အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်၍ တရားဝင်မျက်နှာစုံညီ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အများရှေ့တွင် ထုတ်ပယ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ထုတ်ပယ်ခံထားရသော နည်းပြဟောင်းမှ လက်ရှိတွင် ဒု-ဥက္ကဌ ရာထူးဖြင့် ဝင်ရောက်ချုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါသည်။ယခုလက်ရှိ ဒု-ဥက္ကဌမှာ ယခင်က အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ် အရှေ့တောင်အာရှပြိုင်ပွဲအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ကစားသမားများနှင့်အတူ သွားရောက်စေခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်သော ဒိုင်မရှိသော်လည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူထားသော ၎င်း၏အကိုဖြစ်သူကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းဘားဒိုင်လူကြီးဖြစ်ကြောင်း မဟုတ်မမှန်ပဲ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို လိမ်လည်ပြီး ဝတ်စုံစရိတ်နှင့် အထောက်အပံ့များ တောင်းယူခဲ့သဖြင့် ကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်မှ ယခုလက်ရှိ ဒု-ဥက္ကဌအား ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါသည်။အဖွဲ့ချုပ်အသစ် ရွေးချယ်ရာတွင် စည်းကမ်းချက်များစွာ ချမှတ်ထားသော်လည်း အမှန်တကယ်ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်းတို့အချင်းချင်းသာ လက်သိပ်ထိုးမဲပေး၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်နေပါသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော မဲပေးရွေးချယ်မှု အဆင့်ဆင့်အား ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။လက်ရှိသင်ကြားနေသော ဆရာ ၊ ဆရာမများ အားလုံးကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း မရှိပဲ အထက်မှ သဘောတူညီမှုဖြင့် လက်မှတ်ထိုး စာထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု ဆိုကာ ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် စည်းကမ်းများထုတ်၍ တရားဝင်စာထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုပဲ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါသည်။ တရားဝင်စာထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိပါက အားကစားရုံအားချက်ချင်းမပိတ်ရန် ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသော်လည်း ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ ရုံပြင်မှ သော့ခတ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါသည်။ လာရောက်သင်ကြားမည် ဆိုပါက ရဲခေါ်ပြီး စောင့်ခိုင်းထားမည်ဟုလဲ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့အဖွဲ့မှ သင်ကြားပြသနေသော ကလေးများကိုသာ ရုံအတွင်းသို့ တံခါးဟပေးပြီး သော့ပြန်ပိတ်ထားခြင်း ၊ နောက်ပေါက်မှ ဝှက်၍ဝင်စေခြင်းတို့အား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၄။ အခကြေးငွေနဲ့ သင်လို့မရဘူး စာကပ်ထားလို့ သမီးကလေးတွေ အကုန်လုံးကို Free သင်ပေးမယ်…ပိုက်ဆံသွင်းရမယ်ဆို အဖွဲ့ချုပ်က ကလေးမိဘတွေဆီမှာကိုယ်တိုင် ကောက်ခံပါ… ထားထက်ထက်က ကလေးတွေကို အလကား သင်ပေးပါမယ်ပြောတာ မရဘူး။ ထားထက်ထက် ကလေးတွေကို ထားထက်ထက် ကိုယ်တိုင် သင်ခွင့် မပေးဘူး မသင်ရဘူး…ဘာလို့လဲ မေးတော့ Why? ဆိုတာကိုမမေးနဲ့ ဒါစည်းကမ်းပါတဲ့…(ဒုဥက္ကဌလုပ်သူမှ ပြောပါတယ်။)
၁၉။ သူတို့ အဖွဲ့ထဲက ဆရာဖြစ်သူက နင်တို့ ငါပြောတာနားမထောင်ပဲ နောက်နေ့ လာကစားမယ်ဆိုရင် ရုံကိုသော့ပိတ်ထားပြီး အရှေ့မှာရဲခေါ်ပြီးစောင့်ခိုင်းထားမယ်ဆိုတဲ့အထိ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်…
သူတို့သင်တဲ့ ကလေးတွေကျတော့ နောက်ပေါက်ကနေဝင်ပြီး သော့လာဖွင့်လိုက် ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် သက်သက်တွေ ညစ်ပတ်နေကြတယ်။ဆရာဖြစ်ပေမယ့် တည့်နေစဉ်အချိန်က ပါးလေးတချက်ပဲနမ်းမယ် ခယ်မရယ် ဘာရယ် ဆိုတာနဲ့ ပရောပရီနဲ့ မတည့်တော့အချိန် ကြည့်မရချိန်မှာတော့ အဲ့ကောင်မကို အပြင်ကိုမောင်းထုတ်ပြီး တံခါးပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုပြီး နောက်ကွယ်မှာတော့ ပါးစပ်အရသာခံပြောဆိုနေတာတွေဟာ ဆရာလို့ မပြောထိုက်သလို Sexual Harassment လဲ မြောက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက်ရော မိဘကွယ်ရာမှာ ကစားဖို့လွှတ်ထားမယ်ဆို ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိပါ့မလား?
ထိုကဲ့သို့ ကျွမ်းဘားလောကတိုးတက်ရေးထက် မိမိတို့၏ကိ်ုယ်ကျိူးအတွက်သာရှေးရှုနေခြင်း ၊ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပတ်သတ်၍အရေးယူထုတ်ပယ် ခံထားရခြင်း ၊ အမည်ပျက်ရှိသူ ၊ စာရိတ္တမကောင်းသူ ၊ လူမှုရေးဖောက်ပြန်သူ ၊ စာရင်းအင်းမရှိသူ ၊ ငွေအလွဲသုံးစား ပြုခဲ့ဖူးသူတို့အား အဖွဲ့ချုပ်တွင် ထပ်မံတာဝန်ပေးထားရန် မသင့်ပါ။ကိုယ်တွေဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတော့ နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာဖို့ကိုလဲ ရည်မှန်းမနေပါနဲ့တော့၊ ရည်မှန်းပါတယ်ပြောပြီးလဲ ညာစားမနေကြပါနဲ့တော့….. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကလို ညစ်ပတ်ယုတ်မာတဲ့ ဗီလိန်တွေထက် ပိုယုတ်မာတဲ့သူတော်တော်များများ ဒီထဲမှာရှိနေလို့ပါ ….
အောက်ခြေတွင် ဖြစ်ပျက်နေခြင်းများအား သိစေလိုခြင်းနှင့် အားကစားကစားသူ ပိုများလာစေလိုခြင်း…. အားကစားကိုလွတ်လပ်စွာ ကစားခွင့်ရစေလိုခြင်း…. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားကစားလောက တကယ် တိုးတက်စေလိုခြင်း… ကိုယ်ကျိုးစီးပွားလဲကြည့်သလို အားကစားအမှန်တကယ် တိုးတက်ဖို့အတွက်လဲ ကြည့်စေလိုခြင်း တို့ကြောင့် စာ အရှည်ကြီးရေး ပြောပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အနုပညာနဲ့အားကစားတိုးတက်လာရင် နိုင်ငံအတွက် အခွင့်အလမ်းနဲ့အတူ နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် အရာရာပိုတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်…….အခုလိုမျိုး အားကစားရုံလေးမှာတောင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေနဲ့ အားကစားကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေ မကစားရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ထားထက်တို့ နိုင်ငံမှာ ထပ်ပြီး မရှိစေချင်တော့ပါဘူ” ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။
Miss ထားထက်ထက် ရဲ့ သမ္မတကြီးထံ ပေးပို့တဲ့ တိုင်ကြားစာကို ပရိသတ်တွေ ဖတ်ပြီးလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူ လက်မထပ်ခင် (၄) နှစ်ကတည်းက အတူနေခဲ့တယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့ လှနုထွန်း